MediaLight Mk2 स्थापना निर्देशन - MediaLight बायस प्रकाश
MediaLight Mk2 स्थापना निर्देशनहरू
कृपया मात्र MediaLight वा LX1 प्रति एक dimmer स्थापना गर्नुहोस्। यदि तपाइँ तपाइँको Mk2 फ्लेक्स मा एक Wi-Fi dimmer जोड्दै हुनुहुन्छ, Mk2 फ्लेक्स संग आएको अन्य dimmer को उपयोग नगर्नुहोस्। जब सम्म एउटा हटाइदैन तब सम्म उनीहरु ठीकसँग काम गर्दैनन्।
कृपया कोमल हुनुहोस्।
तपाईंको मिडियालाइट Mk2 मा शुद्ध तामा स्ट्रिपहरू तातो र बिजुली को कन्डक्टर हो, तर तिनीहरू पनि धेरै नरम छन् र धेरै सजीलो च्यात्न सक्छन्।
कृपया कुनाहरू थोरै छोड्नुहोस् र तिनीहरूलाई थिच्नुहोस्। कुनाहरू पनि अलि अलि चिप्लन सक्छ। यो सामान्य हो र त्यहाँ छुट्टिनुको कुनै जोखिम छैन। यसले कुनै छायाँ पैदा गर्दैन। कुनाहरू संकुचन गर्नाले तिनीहरूलाई, अवसरमा, च्यात्नुपर्दछ।
यदि तपाईंको मिडियालाइट टिभीमा जोडिएको छ भने, त्यहाँ एक उत्कृष्ट मौका छ कि यदि त्यसले यसलाई हटाउन खोज्यो भने यो फाडिन सक्छ। गोंद धेरै उच्च बाँन्ड बनाउँछ। यो वारेन्टी अन्तर्गत कभर गरिएको छ।
Your तपाईंको नयाँ मिडियालाइटमा क्षति हुने जोखिम कम गर्नुहोस्। *
कृपया यो स्थापना गाइड पढ्नुहोस् र आनन्दको धेरै वर्षहरूको लागि छोटो स्थापना भिडियो हेर्नुहोस्।
*निस्सन्देह, यदि तपाइँको MediaLight कहिल्यै स्थापना को समयमा तोड्छ यो MediaLight 5- बर्ष ग्यारेन्टी अन्तर्गत कभर गरीएको छ।
यो रातो घेरा माथिको फोटोमा FLEX POINTS देखाउनुहोस् जहाँ तपाईं पट्टी 90 ० ° दुवै दिशा पट्टि घुमाउन सक्नुहुन्छ। कि त फ्लेक्स पोइन्ट दुबै दिशामा मोड्न सक्छ। त्यहाँ कुनाहरू म्यास गर्नु आवश्यक छैन। (कुनाहरू संकुचन गर्न प्रयोग गरिएको बलको मात्रामा निर्भर गर्दै, तपाईं तामा पीसीबी पट्टी फाल्न सक्नुहुन्छ)।
यदि तपाइँले 90 ० ° पालो भन्दा बढी बनाउन आवश्यक छ भने, तपाइँले धेरै फ्लेक्स पोइन्टहरूमा मोडको योजना गर्नुपर्दछ। अर्को शब्दमा, १ 180० ° पालो दुई 90 ० ° पालो बिच वितरण गर्नुपर्दछ।
तपाईले कुनामा घुमाउँदा कुनाहरू सन्तुलन बनाउन आवश्यक छैन, तर यदि तपाईले आग्रहलाई प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्न भने अति कडा थिच्नुहोस्।
ठीक छ, त्यो बाहिरको साथ, कृपया हाम्रो स्थापना भिडियो हेर्नुहोस्!
तपाईंको डिम्मर रिमोट कन्ट्रोलको साथ समस्या छ? यो साइटको उचित लाइन कसरी सुनिश्चित गर्ने भनेर देखाउन यो हतारमा बनाइएको भिडियो अवश्य हेर्नुहोस्।
अतिरिक्त nitpicky विवरण:
यदि यो तपाइँको लागी जानकारी अधिभार हो, यसलाई छोड्न को लागी स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्, तर यदि तपाइँ सोच्दै हुनुहुन्छ कि हामी किन केहि डिजाइन निर्णयहरु बनायौं, तपाइँ शायद तलको जानकारी पाउनुहुनेछ।
MediaLight Mk2 हाम्रो अघिल्लो मोडेल भन्दा धेरै फरक देखिन्छ। यो पूर्ण रूपमा पुनः डिजाइन गरिएको छ। हामी स्थापनामा प्रवेश गर्नु अघि, म परिवर्तनहरूको रूपरेखा बनाउन चाहन्छु र किन उनीहरूलाई बनायौं भनेर वर्णन गर्न चाहन्छु।
पहिले, तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि स्ट्रिपले zigzag बान्की प्रयोग गर्दछ। यो भएको थियो किनभने, पुरानो इकाईहरूको साटो जुन सबै समान स्ट्रिपहरूमा जडान भएका धेरै स्ट्रिपहरूमा निर्भर थिए, हामीले स्ट्रिपलाई piece वा sides साइडमा एकल टुक्राको रूपमा चलाउन अनुकूलन गरेका छौँ, वा in inverted-U मा प्रदर्शन पछाडि।
पुरानो मिडियालाइट फ्लेक्स विपरीत, कुनामा कुनामा कुनै चाल छैन। स्ट्रिपले सजीलो कुनाहरू परिवर्तन गर्दछ, पट्टीमा कमजोर कम्पोनेन्टहरू क्र्याक नगर्न निश्चित हुनुहोस्। मिडियालाइट "M" लोगो वा "DC5V" को साथ चिह्नित भएको FLEX POINT भएको ठाउँमा मात्र बन्ड गर्नुहोस्।
१) Mk1 एकाईहरूले मात्र एक .2m (आधा मिटर) विस्तार कर्ड समावेश गर्दछ। त्यो एकदम छोटो छ, हैन? हामीले यो कंजिंगो बनायौं तर पैसाले होइन।
हामीसँग कँजिलो भइरहेको छ ELECTRICITY ताकि हामी अघिल्लो मोडेलहरू भन्दा कम भोल्टेज ड्रपको साथ लामो लम्बाइहरू दौडन सक्छौं। पुरानो क्वाड स्ट्रिपहरू stri स्ट्रिपमा विभाजन गरिएको थियो जसमा भोल्टेज ड्रप थप समान रूपमा stri स्ट्रिपहरूमा फैलियो, तर यसले न्यूनतम अधिकतम चमक र तारको गुँडको गुँड बनायो। Mk4 अधिक सफा र सजिलो स्थापना को लागी सुव्यवस्थित छ।
हामी स्ट्रिपको प्रतिरोध घटाउन शुद्ध तामाको तार प्रयोग गर्दैछौं, तर किनभने Mk2 फ्लेक्स vv USB पावरबाट चल्न डिजाइन गरिएको छ, तारको लम्बाइ कम गर्दा पट्टीको अधिकतम चमक लगभग १%% ले बृद्धि गर्दछ। एक्स्टेन्सन कर्ड, डिम्मर र स्विचको साथ संयुक्त अझै पनि कुल वायरको feet फिट (१.२ मिटर) छ। .4 विस्तार बिना, तारको कुल लम्बाइ, स्विच र डिमर सहित २.1.2 फिट हो। यदि तपाईंलाई एक ठूलो दूरीमा शक्ति चलाउन आवश्यक छ भने, उत्तम तरीका यो 5v वा 2.4v (तपाईंको क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ) विस्तार कर्ड मार्फत हो।
किन ध्यान दिनुहोस् किन तपाईको फोनका लागि USB चार्जिंग केबल्स m मिटर भन्दा माथि छैन (सामान्यतया, तिनीहरू धेरै छोटो हुन्छन्, १० फिट / m मीटर भन्दा लामो हुँदैन)। यो किनभने तपाईं प्रतिरोधको कारण भोल्टेज ड्रप बिना यूएसबी पावर चलाउन सक्नुहुन्न। पावर कम्पनीले तपाईंको घरमा ११०v एक्सटेन्सन कर्ड चलाउँदैन। तपाईको घरबाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि उच्च भोल्टेज लाइनहरू चाहिन्छ।
ठीक, उही तपाईंको मिडियालाइट Mk2 को लागी लागू हुन्छ।
यदि तपाइँको भित्ते आउटलेट २० फिट टाढा छ भने, तपाइँ तपाइँको बत्ती र टिभीको भोल्टेज गुमाए बिना 20v वा 110v एक्सटेन्सन कर्ड चलाउन सक्नुहुन्छ। अन्यथा, यो टिभीबाट वा नजिकैको पावर स्ट्रिपबाट पावर गर्नको लागि उत्तम हो। ग्रहणले अझै पनि ft फिट विस्तार समावेश गर्दछ, किनकि ग्रहण यति छोटो छ कि यसले कुनै पनि शक्ति कम मात्र खान्छ (m००mA मुनि, यदि तपाईंले सोचिरहनु भएको भए)।
नयाँ Mk2 चिपहरू अत्यन्त नै कुशल छन् (अधिक लामो, उज्यालो 5v स्ट्रिपहरू बनाउने), तर हामीले USB प्लग र स्ट्रिप बीचको प्रतिरोध घटाउनु पर्छ यी लम्बाइहरू प्राप्त गर्न।
यदि तपाईं सुपर-उज्यालो एलईडी चाहनुहुन्छ भने, हामी १२v र २vv विकल्पहरू (र 12०० लुमेन बल्ब) प्रस्ताव गर्दछौं, तर टिभीबाट पावर बायस लाइट्स सुविधाको बारेमा छ, कम तारबन्दी र (केही / धेरै जसो केसहरूमा) बत्तीहरू सक्रिय र बन्द भएको बेलामा। टिभी संग। (सोनी ब्राभियाले यो अन्तिम थोरै राम्ररी गर्दैन। यो निस्कृय हुन्छ तर टिभी बन्द हुँदा पागल जस्तो बन्द कसरी गर्ने र कसरी खोल्दै जान्ने छैन)। हामीले वर्षौंसम्म १२v स्ट्रिप्स प्रस्ताव गरेका छौं, तर तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन वा पूर्वाग्रह बत्तीहरू अत्यन्तै उज्यालो हुन चाहनुहुन्छ। यसैले हामी एक डिमर समावेश गर्दछौं। Vv युएसबी पावरको साथ पनि, बत्तीहरू अलि धेरै उज्यालो छ डिम्मर प्रयोग नगरीकन। जहाँ उच्च भोल्टेज खेलमा आउँदछ जब तपाईं स्ट्रिपहरू कोठाको चारैतिर लामो प्रकाशको रूपमा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
२) नयाँ स्ट्रिपहरू चाँदीको देखिन्छन्, तिनीहरू तामाको जस्तो देखिदैनन्, तर तिनीहरू मिश्र-डूबेका तामा हुन्।
हाम्रो सबै पीसीबी स्ट्रिपहरू शुद्ध तामा हुन्, तर पट्टीको आयु बढाउन, अक्सिडेशन रोक्न र सतह माउन्ट एलईडीहरू र पीसीबी पट्टी बीचको जडानको गुणस्तर सुधार गर्न, तिनीहरू मिश्रन विसर्जनको साथ लेपित छन्।
तिनीहरू त्यस्तै देखिन्छन् जुन उनीहरू डुबाउनु अघि र काट्नु अघि र LEDs र रेजिस्टरहरू सोल्डर गर्नु अघि:
यो RoHS- अनुरूप प्रक्रियाले जिंकलाई निक्क र टिनसँग मिसाइन्छ। यस कोटिंगलाई स्क्र्याचिंगबाट कुनै समस्या छैन, यो एल ई डी र स्ट्रिपको बीच तह हुन्छ (एलईडी मुनि जहाँ तपाईं यसलाई देख्न सक्नुहुन्न) जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
मिश्रित विसर्जनको थप लाभ त्यहाँ छ। यो पर्दाइत तामा भन्दा एक अधिक वर्णात्मक तटस्थ रंग हो। जे होस्, म झूट बोल्दैछु। फरक नगण्य छ। यो सहसंबद्ध रंग तापमान धेरै द्वारा परिवर्तन गर्दैन - २०K को बारेमा। कालो पीसीबीको प्रयोगले अन्तिम र color तापक्रममा अधिक प्रभाव पार्छ। हामीले सेतो स्ट्रिपहरू परीक्षण गरेका छौं जसले २००K सम्मको बदलावको नतिजा ल्यायो।
त्यहाँ अन्य परिवर्तनहरू छन्।
हामी अघिल्लो मिडियालाइट एकल पट्टी, फ्लेक्स र क्वाड मोडेलमा चिपहरू बाट अनुकूलन कोलोरग्रेड Mk2 चिप (एक कस्टम फास्फोर मिश्रणको साथ २2835 SM एसएमडी) मा परिवर्तन गरेका छौं। सीआरआई Ra Ra रा बाट ≥ Ra रा रहेको छ। TLCI 95 from बाट to to मा वृद्धि भयो। यो एकदम स्पष्टसँग सुन्दर प्रकाश हो।
मिडियालाइट प्रो को विमोचन पछि हामी यो चिपमा काम गरिरहेका छौं र चिपले मिडियालाइट प्रो-स्तर वर्णक्रियाय स्थिरता र अत्यधिक उच्च सीआरआई / टीएलसीआई हाम्रो मूल मिडियालाइट संस्करण १ भन्दा कम-प्रति-मिटरमा प्रस्ताव गर्दछ।
ठीक छ, डिजाइनको व्याख्या गर्दै (अहिलेको लागि)। तपाईं यो चीज कसरी स्थापना गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ।
बक्समा के छ (Mk2 फ्लेक्स २ एम-2 मीटर को लागी)
१) USB पुरुष प्लगको साथ टगल स्विच अन / अफ
२) मिडियालाइट Mk2 फ्लेक्स प्रकाश पट्टी
)) डिम्मर इन्फ्रारेड रिसीभरको साथ (डिम्मर जडान बिना टाढाकोले काम गर्दैन)
)) रिमोट कन्ट्रोल
)) .5 मीटर विस्तार कर्ड। केवल यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने। यदि तपाईं टिभीको यूएसबी पोर्टबाट पावर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई सायद यसलाई आवश्यक पर्दैन, र यदि तपाईंले यसलाई छोड्नुभयो भने कम शक्ति प्रयोग गर्नुहुनेछ।
)) स्वीकृत एसी एडाप्टर (उत्तर अमेरिका मात्र)।
)) तार मार्ग क्लिपहरू। यिनीहरूको प्रयोग तारि to्ग सफा गर्न र / वा मद्दतको लागि आईआर रिसीभरको लागि मद्दत गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। ठूला MediaLight Mk7 इकाईहरूले अधिक क्लिपहरू समावेश गर्दछ।
तपाइँको डिस्प्लेमा नयाँ MediaLight Mk2 स्थापना गर्ने क्रममा, यदि तपाइँ around वा sides साइडमा जानुहुन्छ, उदाहरणका लागि, जब तपाइँको प्रदर्शन भित्ता माउन्टमा छ:
१) प्रदर्शनको किनाराबाट २ इन्च मापन गर्नुहोस् (यदि तपाईंसँग एक शासक उपयोगी छैन भने, Mk1 फ्लेक्स बाकसको सबै पट्टि "MediaLight" लोगो आयत- रातो, हरियो र निलो "M" समावेश नगरी) २ इन्च भन्दा बढि लामो)। बाकस अलि अलि बढी २ इन्च बाक्लो (लगभग १ //2 इन्च) छ।
२) USB पोर्टको नजिकको छेउमा प्रदर्शनको छेउमा जान सुरू गर्नुहोस्, बाट सुरू गर्नुहोस् पट्टीको POWER (प्लग) END। यदि तपाईं टिभीको यूएसबी पोर्टमा प्लग इन गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सायद हामीले समावेश गरेको .m मीटर विस्तार प्रयोग गर्नु आवश्यक पर्दैन। यसलाई बन्द गर्नुहोस् (यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने) एक नयाँ स्थापनाको लागि।
यसले कुनै पनि अधिक लम्बाइ काट्न सजिलो बनाउँदछ जब तपाईं सक्नुभयो। यदि तपाइँको प्रदर्शनमा USB पोर्ट छैन भने, पावर स्रोतको नजिकको छेउमा डिस्प्ले माथि जान सुरू गर्नुहोस्, कि यो एक शक्ति स्ट्रिप वा बाह्य बक्स केहि प्रदर्शनमा फेला परेको छ। यदि यो सिधा केन्द्रमा छ भने मलाई थाहा छैन म तिमीलाई के भन्नु पर्ने हो। एउटा सिक्का फ्लिप गर्नुहोस्। :)
खैर, यदि तपाईंले गल्तिले शक्तिको अन्त काट्नु भयो भने, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क प्रतिस्थापन पठाउनेछौं, तर हामी सायद राम्रो हाँस्नौं। यो प्रायः पवित्र संस्थाहरूमा धेरै प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूसँग भएको देखिन्छ, त्यसैले हामी सोच्छौं कि यो धेरै उच्च बुद्धिमत्ताको संकेत हो, तर यो वर्षमा केही पटक हुन्छ र हामी अझै हाँस्दछौं।
तपाईंको बत्तीहरू बर्षको लागि उद्योग अग्रणी वारेन्टी अन्तर्गत कभर गरिएको छ र हामी botched प्रतिष्ठानहरू कभर गर्दछौं, त्यसैले धेरै जोड नदिनुहोस्। यदि तपाईं MediaLight Mk5 को गडबड गर्नुहुन्छ, मात्र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
)) यदि तपाइँले स्ट्रिपबाट अतिरिक्त लम्बाइ काट्नुपर्‍यो भने, तपाइँ यसलाई सेतो रेखामा काट्न सक्नुहुन्छ जुन सम्पर्कको प्रत्येक जोडीलाई पार गर्दछ। तल लाइन मा काट्नुहोस्:
सबै भन्दा भित्ता माउन्ट गरिएको स्थापनाहरूको लागि यसले सबै कुरा कभर गर्नुपर्दछ।
निम्न "इन्भर्टेड-यू" निर्देशनहरू लागू हुन्छ जब स्ट्यान्डमा प्रदर्शनको लागि २ मी (वा कम) स्ट्रिप प्रयोग गर्दै। अर्को शब्दहरूमा, जब तपाईं ed किनार वरपर जान कोशिस गर्दै हुनुहुन्न:
यस मार्गनिर्देशनले लामो समयसम्म काम गर्दछ जब तपाईं हाम्रो आकार चार्टबाट तपाईंको प्रदर्शनको लागि सही आकार अर्डर गर्नुभयो।
यहाँ एक अस्थायी भिडियो छ जुन मैले भर्खरको तुफान सम्बन्धी ब्ल्याकआउट (जहिले पनि पूर्वाग्रह प्रकाशको साथ यात्रा;)) को दौरान एउटा होटेलमा क्र्यास गर्दा गरेको थिए। हामी सेप्टेम्बरमा यसलाई स्थायी केहि संग प्रतिस्थापन गर्नेछौं, तर यो छोटो र मीठो छ। यस अवस्थामा यस 1२ इन्च डिस्प्लेमा १ मीटर पट्टी छ, तर यसले ठूलो प्रदर्शनमा २ मिटर वा m मी स्ट्रिपको लागि काम गर्दछ।
मेरो प्रदर्शन स्ट्यान्डमा छ जब म एक MediaLight Mk2 कसरी स्थापना गर्ने?
१) स्ट्रिपको मध्य भाग स्ट्रिपको अन्त्यको नजिक राखेर र मध्यबिन्दु फेला पारेर पट्टिको केन्द्र पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईं LEDs गणना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रति मीटर 1० एलईडी हुन्छन्। यदि स्ट्रिप २ मिटर लामो छ भने th० औं र st१ औं एलईडी बीचको सम्पर्कहरू मध्यबिन्दु हुन्।
२) प्रदर्शनको पछाडि टिभीको बीचमा पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईं केन्द्र मास्किंग टेपको एक टुक्राको साथ चिन्ह लगाउन सक्नुहुनेछ वा यसलाई चाकको साथ पनि चिह्न लगाउन सक्नुहुनेछ, बिस्तारै, पेन्सिल इरेजरको साथ। मापन प्रदर्शन को शीर्ष बाट लगभग १/1 बाटो। यो सहि हुनु हुँदैन! यो "१/3 तरीकाले तल शासन गर्ने" मात्र प्रदर्शनको sides पक्षहरू भन्दा छोटा हुने स्ट्रिप प्रयोग गर्दा लागू हुन्छ!
यदि तपाइँसँग display3"प्रदर्शनको लागि m मी छ भने, सबै साइडका डिस्प्लेको किनारबाट २" को सामान्य दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहोस्।
नोट: यदि तपाइँको प्रदर्शन को पक्षहरु घुमाएको छ, ठीक छ कि बत्तीहरु लाई किनारबाट केहि अगाडि राख्नु पर्छ - कि जहाँ प्रदर्शनको पछाडि प्यानल समानान्तर हुन्छ, वा किरण बाट टाढा पर्याप्त सीधा दृष्टि लाई रोक्नको लागि। एलईडीको साथ जहाँबाट तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ।
)) स्ट्रिपको बीचमा प्रदर्शनको बीचमा जोडेर सुरु गर्नुहोस् र प्रदर्शनको पक्षमा तपाईंको बाटोमा काम गर्नुहोस्। यसले मध्य प्वाइन्टमा रातो प्लास्टिक समर्थन काट्न मद्दत गर्दछ। तपाईं पट्टीबाट बिस्तारै यसलाई तानेर यो गर्न सक्नुहुन्छ।
Inverted-U प्रयोग गर्दा, स्ट्रिपमा कूल एलईडीको १/२ ले माथिबाट तेर्सो भाग १/1 समावेश गर्दछ। त्यसो भए, यदि यो २ मीटर स्ट्रिप हो भने, तेर्सो भाग लगभग approximately० एलईडी (१ मिटर) पार हुनुपर्दछ। त्यहाँ प्रत्येक बाँकी १~ ~ एलईडी तल हुनु पर्छ। यदि यो meter मिटर स्ट्रिप छ भने, त्यहाँ प्रत्येक पक्षमा LEDs एलईडी तेर्सो एलईडी र २२ एल ई डी हुनुपर्दछ।
स्ट्यान्डमा टिभीको लागि, पूर्वाग्रह लाइटहरू सामान्यतया १/1 मार्कमा राखिन्छ किनभने तपाईं वास्तवमै टिभी स्ट्यान्ड, कुनै पनि केन्द्र च्यानल स्पिकर वा ध्वनि बारहरू, वा टिभी कन्सोलमा बसिरहेको हुन सक्छ कि अन्य tzotchkes लाई प्रकाश दिन चाहनुहुन्न। ।
यदि तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ र पूरै चकित हुनुभएको छ भने कृपया झिक्नुहोस्। हाम्रो च्याट मार्फत मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् (यस पृष्ठको दाँया तल्लो)। आगामी दिनमा म अधिक फोटो र भिडियोहरू थप्ने छु। हामी तपाईंको मिडियालाइट Mk2 प्राप्त गर्नेछौं र कुनै समय बिना चलेको छ।